Akwụkwọ akụkọ na-adịghị anwụ anwụ, Na-ere ozi nwụrụ anwụ | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 25, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Dave Onye Ike, Robert Scoble, Scott Karp, Mathew Ingram, na ọtụtụ ndị ọzọ nọ na-ede banyere Robert blog post, Akwụkwọ akụkọ anwụọla.
Aga m aga ya n'ihu… ire ozi akwuola.
Ebe ahụ. Ekwuru m ya. N'ịbụ onye rụworo ọrụ ihe karịrị afọ iri na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ, echere m ya. Nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ akụkọ anaghị ere ahịa ọzọ dịka ha na-ere mgbasa ozi. Akụkọ a abụwo nke abụọ maka ire akwụkwọ akụkọ ruo oge ụfọdụ. Akwụkwọ akụkọ na-acha agba iji ree mgbasa ozi. Akwụkwọ akụkọ na-arụ ọrụ pagination iji ree mgbasa ozi Akwụkwọ akụkọ wuru osisi akwụkwọ akụkọ ọhụrụ maka mgbasa ozi ka mma. Akwụkwọ akụkọ ugbu a na-ere ozi, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ ọdịnala… ọ bụghị n'ihi na ha na-ere ozi ọma kama ọ bụ n'ihi na ọ na-abawanye ego mgbasa ozi.
Okwu m ga-ewe ọtụtụ ndị odeakụkọ iwe. O wutere m nke ukwuu n'ihi na m na-akwanyere ndị nta akụkọ ezigbo ùgwù. Banye n'ime ụlọ akụkọ ọ bụla, agbanyeghị, ị ga-ahụ mmefu ego, ndị editọ na-arụ ọrụ aka dị mkpụmkpụ, akwụkwọ akụkọ na-ejupụta oghere AP ọdịnaya. Ndị nkwusa na-ebipụta mgbasa ozi, ọ bụghị akụkọ. News bụ dịanyā dị n'etiti mgbasa ozi n'ihi na mgbasa ozi na-eweta ego.
Ọtụtụ usoro mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ na-etinye mgbasa ozi karịa akụkọ… "Zụta akwụkwọ akụkọ Sọnde ma ị ga-enweta ihe karịrị $ 100 na Kupọns." Enweghị m ike iche etu nke ahụ si eme ka odeakụkọ na-eche na… 25p dere site na mpempe akwụkwọ mposi.
Echeghị m na nke a dị iche karịa mmalite nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ, n'agbanyeghị. Cheedị otú onye ọrụ nwere nkà ga-esi na-ewepụta ihe ndị na-emepụta micrometer ma wuo injin ụgbọala. Ndị ọrụ ahụ bụ ndị na-ese ihe, na-amụ ọrụ ha n'ọtụtụ afọ, na-aga ụlọ akwụkwọ azụmaahịa, na-amụ ọrụ metallurgy, mgbakọ na mwepụ, na ọrụ igwe dị egwu. Maa amụma? A dochiela ha. CNC Igwe ihe igwe ihe na robotik anọchila ndị ọkachamara ọkachamara. Otu nwere ike imepụta ihe na kọmpụta ma mepụta ngwa ngwa ha na enweghị enyemaka mmadụ.
Nke ahụ ọ pụtara na anaghị asọpụrụ ndị ọrụ igwe? Ọ bụghị n'ezie. Naanị ka edochiri ha. A na-edochi ndị odeakụkọ. Amaara m, amaara m… ndị nta akụkọ nwere ọrụ, gụrụ akwụkwọ, ha na-enyocha isi mmalite, ọ bụ ha maka okwu ha. Ndị a niile bụ eziokwu mana akụnụba bụ ihe na - emeri. Lelee akụkọ mgbede ma ọ bụ gụọ akwụkwọ akụkọ ma ana m ekwe nkwa na ị ga-ahụ opekata mpe otu mkpirisi na blọọgụ, vidiyo ebugo, ma ọ bụ weebụsaịtị. Agaghị achọpụta ndị ozi ala ọzọ ma kesasịa ya, ọ bụ m na gị na-achọpụta ya ma na-ekesakwa ya n'Internetntanet.
Ihe mere ebe a bụ na ndị ahịa ' mkpa n'ihi na azụ akuko agaala. Ndi oru nta akuko na akwukwo ozi bu okwu nke ndi obodo. Enweghị nhọrọ ndị ọzọ. Ugbu a nhọrọ dị enweghi oke na ọnụ ala. Enwerela àgwà eweliri? Ikekwe. Ọ dị ka ịtụle Wikipedia na Encyclopedia Brittanica. Wikipedia nwere ọtụtụ ozi na ọ naghị efu penny. Brittanica nwere obere akụkụ nke ederede mana ọ ka mma. Kedu oge ikpeazụ ị zụrụ akwụkwọ encyclopedia? Nke ahụ bụ azịza gị.
Eziokwu bu na m nwere ike ide maka Google ọhụrụ Blogbar. Ederede ahụ nwere ike ịnwe nsụpe na ụtọ asụsụ, nwere ike ọ gaghị enwe ntụnye aka, nwere ike ọ gaghị atọ ụtọ dị ka ọ ga-adị na peeji nke Teknụzụ Times - mana ọ ruru ọtụtụ puku ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị n'eziokwu achọghị ịma ihe ndị ahụ. Ha nwere obi ekele na m dere banyere ya ma na-eji ọdịnaya ahụ emeziwanye saịtị ha ugbu a. Ọ dịghị onye nta akụkọ ịkwụsị akụkọ ahụ.
Ntaneti bu uzo ohuru nke na edochi ozi oma na akwukwo na ndi oru nta akuko. Ọ dị nwute dị mwute, ọ bụ ọmarịcha ahịa ga-apụ n'anya. A ka ga-enwe ndị odeakụkọ, dịka ọnweghị ọtụtụ. A ka ga-enwe akwụkwọ akụkọ, ọ bụghị dị ka ọtụtụ. Ka anyi che ya iru. Akwụkwọ akụkọ ga-aga n'ihu na-ahụ ụzọ ndị ọzọ esi ere mgbasa ozi. O nwere ike ọ gaghị abụ ink na osisi ndị nwụrụ anwụ, mana ha ga-ahụ ụzọ.
Akwụkwọ akụkọ anwụghị anwụ, ire akụkọ nwụrụ anwụ.
> Akwụkwọ akụkọ ugbu a na-ere akwụkwọ ozi, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ omenala?
Enwere m ike ịkọ na nke ahụ. Akwụkwọ anyị na-ebipụta kwa izu na-enwekarị mpempe akwụkwọ na Tuesday karịa ka ọ nwere peeji nke akụkọ.
Dị ka ụlọ ọrụ egwu na ihe nkiri ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ ga-achọta ụzọ ọhụrụ iji ree onwe ya - mee ka ọ bụrụ ahụmịhe kwa ụbọchị na ndị mmadụ anaghị eche echiche iwepụ otu 1.50 maka.
Nke a na-agakwa karịa maka obere akwụkwọ akụkọ mpaghara
Enwere m mmasị n'okwu gị gbasara akụkọ mpaghara. M ka na-anụ ụtọ akwụkwọ akụkọ Business anyị na mpaghara a yana akwụkwọ akụkọ obodo m. Ha ka nwere nnukwu eleba anya na net - njikọ ha na obodo.
N’ụzọ na-emegide onwe ya, nnukwu akwụkwọ akụkọ niile na-aga n’ihu na-eresị ndị nnukwu mmadụ ndị na-agbasa ozi ọma. N’ebe a Indy, kpakpando nke Gannett nwe. Gannett na-aga n'ihu igbubi ihe ndị dị n'ime obodo ma gbalịa ịkwanyekwuo na ụlọ ọrụ site na ijikọ usoro. Ọ na-egbupụ akwụkwọ ahụ site na obodo, n'agbanyeghị. Igbu onwe onye.
Ọ baghị uru naanị m ịzụta akwụkwọ ahụ. Emere m ya kwa ụbọchị maka ihe karịrị afọ iri. Enwere m ike ikwu n'eziokwu na anaghị m agwa ịnweta ozi m n'efu na ntanetị.
Na Canada - karịsịa Ontario niile obere akwụkwọ akụkọ ahụ bụ nke otu n'ime ndị dike mgbasa ozi abụọ. Echeghị m na e nwere akwụkwọ akụkọ ọ bụla na-enweghị nnwere onwe nke nwere ihe ọ bụla fọdụrụ na obere obodo ma ọ bụ obodo mepere emepe.
Ove a nwere obi uto n'ime afọ ise gara aga ruo afọ iri ebe ndị dike abụọ ahụ gara ịzụ ihe. Echere m na ihe dị oké ọnụ ahịa furu efu n'ezie mgbe nke ahụ mere.
Ọmarịcha edemede! Echeghị m na nke a kwesịrị ịbụ nnukwu ihe ịtụnanya- ebe ọ bụ na web bidoro igbu ndị ọgbara ọhụrụ akwụkwọ akụkọ nwere na nsogbu, ma ọ bụ na ha ga-amata na nsogbu dị n'ụzọ.
Paul A. Ogige
Nsogbu a bụ na akwụkwọ akụkọ erebeghị akụkọ ahụ ruo ọtụtụ iri afọ. Ozugbo agha akwụkwọ akụkọ banyere akụkọ ọkụ. Kedu mgbe agha ikpeazụ nke ụdị a onye ọ bụla nwere ike icheta?
Onye isi akwụkwọ akụkọ ga-abụkwa onye kacha ere ahịa na onye isi ọrịre ahịa. Ndika akamba itieurua ekededi ekeme ndiwụt ke idịghe ntre ke ererimbot mfịn.
Lee anya n’ihu akwụkwọ akụkọ ndị dị n’ebe a na-ere akwụkwọ ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ihu peeji nke akwụkwọ akụkọ ndị e debere n’ebe ahụ. Otu nwere ike na-arụ ụka na ọtụtụ n'ime magazin na-eji "ọnụ ala 78--zọ-iji nweta ume ọhụrụ-gị-mmekọahụ-ndụ aghụghọ" iji ree ndị na-agụ akwụkwọ. N'agbanyeghị nke ahụ, agọnahụghị na akwụkwọ akụkọ na-ere n'usoro n'usoro ma na-egosi ndị na-agụ ya ọdịnaya. Ọ dị ka à ga-asị na anyị na-arụ ọrụ ka ihu ihu na-agwụ ike ma ghara ịdị mkpa karịa ka ọ dị.
Ndị editọ ga-arụ ụka na ịbụ “nkwado” na-ebelata ngwa ngwa ha. M ga-arụ ụka na akụkọ kachasị mma, nke kachasị mkpa, nyocha nke meriri Pulitzer nke afọ a bụ obere uru ma ọ bụrụ na imirikiti ndị ahịa akwụkwọ akụkọ anaghị echegbu ịgụ usoro ahụ.
Anyị ga-adị mma n'ire akụkọ ahụ ọzọ. Anyị ga-agarịrị n’ihu ịgwa ndị na-agụ ya ihe dị na ya maka ha ma ọ bụrụ na ha agụ.
Na njedebe anyị ga-enwerịrị obi anụrị banyere akụkọ ahụ na ọdịnaya ndị ọzọ anyị na-ebuga kwa ụbọchị, kwa izu na kwa ọnwa wee kwupụta ọitementụ ahụ n'ụzọ na-efe efe nye ndị anyị nwere olileanya iru ma nwee mmetụta na akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na anyị dị ka ndị editọ na-arụ ọrụ a, dollar ga-agbaso na akwụkwọ akụkọ (n'agbanyeghị etu esi nyefee ha) ga-aga nke ọma.